यसरी ठगे जाजरकोटका सूनचाँदी व्यावसायीले उपभोक्तालाई – Rara Khabar
यसरी ठगे जाजरकोटका सूनचाँदी व्यावसायीले उपभोक्तालाई
पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुबाट उपभोक्ताहरु व्यापक ठगिदै आएको रहस्य खुलेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जबाट आएको टोलीले गरेको अनुगमनबाट यस्तो रहस्यको उजागर खुलेको हो ।
सदरमुकाम खलंगामा संचालित एक दर्जन बढी सुनचाँदी व्यवसायीहरुबाट उपभोक्ता ठगीदै आएका छन । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जबाट आएको टोलीले गरेको अनुगमनबाट यस्तो रहस्य खुलेको हो । सुनचाँदी व्यवसायीले नाप तौल गर्ने काँटा माप दण्ड विपरित सन्चालन गरेको पाइएको छ । जिल्लामा ५० बढी सुनचाँदी पसल सन्चालन गरेर सुन उपभोक्ताहरुलाई व्यापक रुपमा खुलेआम ठगी रहेका छन ।
को को ठगीए त ?
भेरीमालिका ३ कल्यानपुरकी रेखा खनाल शाहले गत बर्ष तीजमा ठाटीबजारमा रहेको एलिना रुकुमेली ज्वैलर्सबाट २० लाल भनेर सुनको सिक्री किन्नु भयो । उक्त सिक्री जम्मा ८ लाल मात्र रहेछ । रेखाले सिक्रीमा १२ लाल नपुगेपछि किनेको पसलमा जादा दिदि गल्ती भयो । यो कुरा बाहिर कतै नगर्नु होला हजुरको ६ हजार रुपेया लैजानु पर्यो । रेखाले सुनमा ठगेको कुरा बाहिर गर्दा सुन व्यवसायी शिब गहतराज र जगत सुनारले कुटपिट गरे ।
त्यसैगरी खलंगा ३ स्यालाकी कमला केसीले पनि एलिना रुकुमेली ज्वैलर्सबाट ३६ लालको तिलहरी खार्दा ८ लाल घटी भएको, २८ लालको जन्तर खार्दा १४ घटी भएको थियो । यो कुरा रेखा र कमलाले सहेर बस्नुको विकल्प थिएन । खलंगा ३ गोगनेखोलाकी विष्णु कार्कीले ठाटीबजारको तिलक ज्वैलर्समा ५० लालको तिलहरी बनाउना दिदा २० लाल मात्र पाउनु भयो । यो कुरा पनि कार्कीले सहेरै बस्नु भएको थियो । यसरी सुनचाँदी व्यवसायीबाट उपभोक्ताहरु ठगीदा पनि कसैको ध्यान पुगेन ।
रेखा, कमला र विष्णु त सुनव्यवसायीबाट ठगिने केहि पात्र मात्र हुन् । उनीहरु जस्तै भेरीमालिका नगरपालिका ३ स्याँलाका पदमबहादुर खत्री, धनसरी परियार, रिसाङका चन्द्रकला पुन, पे्रमकला पुन, दिपा विक, ससीला पुन, सरस्वती विक लगाएत उपभोक्ता यसैगरी ठगिएका छन जाजरकोटमा । यहाँका सुन व्ययपारीले सुन भन्दै पितलमा सुनको जलव लगाएर विक्री वितरण गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । सुनको व्यपारबाट उपभोक्तालाई ठगेर अकुच सम्पती आर्जन गर्ने यहाँका सुन व्यवसायीलाई कडा कारवाही हुनु पर्ने रेखा खनाल शाहको भनाई रहेको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका सहायक निरिक्षक गुरुप्रसाद पोखरेलको टोलीले सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गर्दा नेपाल सरकारबाट मान्यता विपरितका ढक तराजु काँटा प्रयोग गरेको पाईएको छ । नापतौल विभागको छाप लागेका डिजिटल काँटा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सुन चाँदी व्यवसायीले मापदन्ड विपरित सनचालन गरेका चिनीयाँ डिजिटल काँटा प्रयोग गरेको भेटिएको हो ।
गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगन्जका सहायक निरिक्षक पोखरेलले व्यवसायीहरुलाई नयाँ काँटा किनेर ७ दिन भित्र क्षेत्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ । अनुगमन गरिएका ११ वटा सुनचाँदी पसल ८ वटा मापदन्ड विपरितका चिनीयाँ डिजिटल काँटा टोलीले जफत गरेको छ ।
जसमा एलिना रुकुमेली ज्वैलर्स र जगत ज्वैलर्सले मान्यता प्राप्त डिजिटल काँटाको प्रयोग गरेपनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट अनुमती नलिएर चलाएको पाइएको थियो । अधिकांस पसल दर्ता नगरेरै सन्चालन गरेको, नविकरण नगरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले सदरमुकाम खलंगामा रहेका १६ सुनचाँदी पसलहरुमा विकास ज्वैलर्स, दीप ज्वैलर्स, पूणिमा सुनचाँदी पसल, न्यू रुकुमेली उमंग ज्वैलर्स, विष्णु सुनचाँदी पसल, रमेश ज्वैलर्स, तिलक ज्वैलर्स, जगत ज्वैलर्स, एलिना रुकुमेली ज्वैलर्स, बिरेन्द्र ज्वैलर्स र न्यू मिथिला ज्वैलर्स लगाएतका सुनचाँदी पसल, भवानी ज्वैलर्स, बागलुङ्ग सुनचाँदी पसलहरु माप दन्ड विपरितका डिजिटल काँटाको प्रयोग गरेर उपभोक्ताहरुलाई व्यापक रुपले ठग्दै आएका छन । यस तर्फ समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जावस ? अनुगमन टोली आउने थाहा पाएपछि कतिले पसलनै बन्द गरेर भागेका थिए ।
कारवाही गर्न उपभोक्ताको माग
जिल्लामा सुनचाँदी व्यवसायीहरुबाट दैनिक उपभोक्ताहरु व्यापक ठगिदै आएको भन्दै स्थानीयले टोलीसंग कडा कारबाही हुनु पर्ने माग गरेका छन् । सदरमुकाम भित्रै सुन किन्ने उपभोक्ताहरु दिनडाहडै ठगिन्छन भने दुर्गम गाउँको अबस्था के होला स्थानीयको भनाइ छ ।
नापतौल ऐन २०२५ को कानुनी प्रावधान अनुसार डिजिटल काँटाको एकुरेसी १० मिलीग्राम हुनुपर्ने र ६ सय ग्राम डिजिटल काँटामा २ सय ग्राम (बुलियन ढक÷पितलको ढक) राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको र ३ सय ग्रामको काँटामा १ सय ग्राम बुलियन ढक राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको निरिक्षक गुरुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनु भएको छ । यसमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयबाट जाँचपास भएका डिजिटल काँटाहरुमा भ(ज्ञण् mन लेखेको हुनु पर्ने निरिक्षक पोखरेलको भनाइ छ । जो कोहीले पनि सुनचाँदी किन्दा काटमा १९९.९९० र २००.०१० नम्बर लेखेको हेरेर मात्र किन्नुु पर्छ पोखरेले बताउनु भयो । जाजरकोटमा बर्षौदेखि सुन व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगिदै आएका पत्रकार महाँसंघ जाजरकोटका सभापति जनक केसीको भनाई छ ।
कडा कारबाही हुन्छ प्रजिअ गौतमले
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगन्जबाट आएको टोलीले खलंगामा गरेको बजार अनुगमन गर्दा यहाँका सुनचाँदी व्यवसायीले नाप तौल गर्ने काँटा माप दण्ड विपरित सन्चालन गरेको पाइएको जानकारी दिनु भएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले तोकेको मापदन्ड अनुसारका डिजिटल काँटा प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको समयमा यहाँका सुन व्यवसायीहरुले तोके अनुसारको मापदन्ड पुरा नगरे नापतौल ऐन २०२५ को कानुनी प्रावधान अनुसार कडा कारबाही हुने प्रजिअ गौतमले जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रकाशित मितिः २१ असार २०७३, मंगलवार १२:५३